ဖူးနုသစ်: ကြုံခဲ့ဖူးသမျှ ဗီဇာအကြောင်း
Ko Thagyee said...
ကောင်းတယ် ကိုဇက်တီရေ ၊ အဲလိုလေးတွေ ဖတ်ရတာ အရမ်း ဗဟုသုတ ရပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် မြန်မာ ပတ်စပို ့ကိုင်ထားရင်ပေါ့ ။ ကျွန်တော်လဲ ယိုးဒယား ဖူးခက်က
အပြန်မှာ ရစ်ခံရဖူးတယ် ။ ပြန်ရစ်နိုင်မှ တော်ကာကျတယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ ။
အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဦးစမှာ အားစုရဦးမှာပါဗျာ ။
ဗဟုသုတ ရတယ်..ကို ZT ရေ။ ကျေးဇူးဗျို ့
ဒီလထဲမှာပဲ အိမ်ကလူ USဗီဇာ သွားလျှောက်တာ multi journy
Nyo Lay said...
အားငယ်စရာ မရှိပါ။ ZT မကွန်ကဲ့သို့ ဥရောပကို အလည်မသွားဖူးပါ။ အလုပ်ကိစ္စဖြင့်သာ သွားဖူးပါသည်။ :D
သွားနိုင်တဲ့ လူတွေ သွားကြပါ...တို့တွေ တော့ ရန်ကုန်တောင် မပြန်ဖြစ်ဘူး
How about the Myanmar official passport to US? I amagovernment staff and i haveachance to study in Califonia. Is it possible for visa? I am holding green passport.
မဗေဒါကတော့ တရုတ်ပြည် immigration ကိုအမုန်းဆုံးပဲ.. ဟိုတစ်လောကမှ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်သွားထားတာ.. ဘလော့ပေါ်ရေးသင့်မရေးသင့် စဉ်းစားနေတာ..
တရုတ် အင်မီဂရေးရှင်းက မြန်မာပတ်စပို့ တင်လိုက်တာနဲ့ကို ရစ်တာဗျား။
Anonymous -> ကျွန်တော်လည်း မသေချာဘူး။ ကျွန်တော့်ကို အင်တာဗျူးမှာ မေးတာတော့ စစ်တပ်ထဲမှာ အမျိုးရှိလား ဆိုတာရယ်၊ ကျွန်တော့် အဖေက အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတော့ ဘာရာထူးလဲ ဆိုတာရယ် အဲဒီ နှစ်ခွန်းတော့ မေးတယ်။
အရစ်ဆုံးက ဘယ်နိုင်ငံများလည်းလို့.. မလေးရှားကိုး.. မလေးရှား အင်မီးဂရေးရှင်းရစ် ခံနိုင်ရင် တစ်ခြားနိုင်ငံတွေဆို အပျော့ပေါ့နော်။ :D မလေးရှားကတော့ ပြောမနေနဲ့တော့.. သူတို့ ထုတ်ထားပေးတဲ့ Employment Pass ကိုတောင် သူတို့စက်က scan ဖတ်မရ ဖြစ်နေတတ်တယ်။
Great Mekong said...
ရေမီးရှား ဗီဇာကြာတော့ ကော်
မလေးရှားဗီဇာကို ဟိုးအရင်က မသိလို့ Bussiness နဲ့ လျှောက်မိတာ တခါလျှောက် ၁လပဲပေးတော့ စာမျက်နှာ ၅ခုလောက်ပုပ်သွားတယ်။
မစုချစ်လည်း ပထမဆုံး အခေါက်မှာ အဲဒီမျက်မမြင်ဦးလေးကြီးနဲ့ ကြုံဘူးတယ်။ သိပ်မမေးဘူးတော့ ..ပေးလိုက်တာပဲ။ အမေးအမြန်းထူပြီး အပေါက်ဆိုးတာက တရုတ်မတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ ဖိလစ်ပင်းလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ဦးလေးကြီးက သဘောကောင်းတယ်။ Multiple Visa တောင်းတာတော့ ပေးဘူးတော့။ မြန်မာတွေကို ပေးလို့မရဘူးတဲ့... ကိုယ့်တုန်းကတော့ အဲသလို ပြောလွှတ်လိုက်တယ်တော့။ ကိုဇက်တီတော့ ရတယ်နော်....။ ဖောင်အပိုကတော့ စစ်တပ်နဲ့ န၀တတို့နဲ့ ပါတ်သက်မှုရှိလားဆိုပြီးတော့.... မြန်မာတွေအတွက် ဖြည့်ရသေးတာ...